Bilxiginnaa Malee Badhaadhinni Hin Jiru!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBilxiginnaa Malee Badhaadhinni Hin Jiru!!
Bilxiginnaa Malee Badhaadhinni Hin Jiru!!
Bilxiginnaa Malee Badhaadhinni Hin Jiru: Aadde Burtee Gaafadhaa
Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru, naannolee kurnanuu dabalatee, Paartii Bilxiginnaa jedhamu dha. Boordiin filannoos dambii bulmaataa paartichi dhiyeessef irraa laalee kan galmeessuun beekamtii kenne, Paartii Biliginnaa kanaafi malee Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa jedhamuuf miti. Paartiin Bilxiginnaa Boordii filannootti galmaa’e Oromiyaarraa damee qabaata malee paartii of danda’e ka biraa qabaachuu hin danda’u. Paartiin Badhaadhina jedhamu hin jiru. Ibsa maqaatu hiikama/turjumaanessama malee maqaan hin turjumaaneessamu.
Paartii Bilxiginnaa (addatti damee Amaaraa fi Finfinnee jirurraa addaatee kan mul’atu) jechuun ammoo, Paartiiwwan akka EZEMA, ABIN (NaMA) fi Baaldiiraas fa’arraa garaagarummaa ilaalcha kan hin qabne, federaalummaa sabdaneessaa diiguu kan fedhu (keessattuu Oromiyaa diiguu), Itoophiyaa olaantummaa Afaan Amaaraa fi aadaa Habashaa jalatti ijaaruu kan fedhu ta’uu, namni amma hin hubanne yoomuu hubachuu hin danda’u. Namni Oromoo ta’ee ykn Oromiyaa keessa ta’ee Paartii Bilxiginnaa deeggaru, filatu kamuu EZEMA, ABIN fi Baaldiiraasii filatee fi deeggareetti of lakkaa’uu qaba.
Dhugaan jiru hadhaa’us mi’aayus kanuma qofa. Liqimsuu dha.
Nama jechuun gaafa namni dhibe kan nama ta’ee argame!
Seenaa duubaa fi ilaalcha jara kanaa hin beeku baadhullee, gaafa Walloorratti sababa Oromummaasaatiif itti duulamee ajjeefamee qe’ee isaa gubamee buqqa’etti Paarlaamaa keessatti ummata isaaniif sagalee ta’uun isaanii jajjabeeffamuu qaba. Duulaa finxaalessoota Amaaraa cabsuurratti gumaacha qaba. Galatoomaa!
“Lolli saba Oromoo Walloo irratti humna Addaa Naannoo Amaaraatiin banamee jiru eenyummaa bu’uura kan godhate Oromoo irratti kan banamedha. Yakka duguuggaa sanyiitu saba Oromoo Walloo irratti raawwataa jira. ‘Seenaa abboota keenyaa deebisna’ jedhanii yakka uummata keenyarratti raawwataa ture deebisuuf maqaa Minilik moggaafatanii Walloo buufatanii yakka waraanaa uummata keenyarratti raawwataa jiru. Nuti miidiyaa hin qabnu, aktiivistii hin qabnu. Haqa keenya garuu eenyuufuu hin dhiifnu”
Dhiira haati deesse!
“Maqaa daaboo ‘ABO Shanee’ jettaniin, uummanni koo Oromoon Walloo dhumaa jira. Maqaa hin jirre Oromoo Wallootti baastanii akkamiin nu fixxu? Wallo qe’een isaa gubatee jira, madoo isaa wal’aannachuu hin dandeenye. Namootni madaa’anii Hospitaala seenan achi keessatti ajjeefaman; har’ayyuu reeffi nama kudhanii bokokee achi keessaa akkatti fudhannu dhabnee Hospitaala balleessaa jira. Manni hiyyeessaa guutummaatti daaraa ta’eera. Uummatni Itiyoophiyaa beekuu waan naaf qabantu jira. Walloon sababa sadiin waraanamaa jirti.
1ffaa: Oromoo waanta’aniifi
2ffaa: Musiliima waanta’aniifi
3ffaa: Nafxanyaatu sirna harkaa kufe deebifachuuf uummata nagaa fixaa jira. Kanumaaf Oromoon Walloo ajjeefamaa jira. Waan nama ajaa’ibu, maqaa mootii sirna nama nyaataa Minilik jedhamuun birgeediin of moggaase akkamiin jiraachuu danda’e? Akkamiin maqaa waraanaa maqaa mootii nafxanyaan moggaasamuu danda’e? Birgeedii Miniliktu Wallootti waraana bane. Humni addaa Amaaraas uummata Walloo fixaa jira. Gaafa ajjeesu maqaa ABO Shanee jedhu itti moggaaseeti. Garuu qotee bulaa fixaa jira. Uummanni Itiyoophiyaa kana nuuf haa beeku.!”
Abdii Badhaasa Abbaa Makoo tiin.
Yoo ummata ofii bakka bu’an akkasi
Namichi kun har’a paarlaamaatti dhugaa uummata #Walloo tokko tokkoon dubbate.
“Oromoon Walloo waan sadiif lolamu.
1. Oromoo waan ta’aniif
2. Musliima waan ta’aniif
3. Fiinxaaleyyiin Amaaraa seenaa abbootii keenyaa deebifna jedhanii waan yaadaniif
Seenaa abbootii keenyaa deebifna jedhanii waraana duguggaa sanyii ummata Walloo mana hidhaa bal’aa keessa jiraaturratti gaggeessaa jiru. Maqaa “Oneg – shanee” jedhuun uummata harka duwwaa jiru irratti humni addaa Amaaraa waraana baneera.”
#INBOX #Finfinnee Irraa
“Waraanni Eritraa baay’inaan gara Finfinnee tti seenaa jiru. Boruuf iftaan gara #Gindabarat, #Gujii, #Booranaa, #Wallaggaa fi #Kaaba #Shawaa deemu. Akka oduun nuqaqqabetti hedduun isaanii ijoolleedha. Gara Oromiyaa dhufuu isaaniitiif hedduu gammadanii jiru.”
Of egaanoo arifachisaa
Waraanii ertiraa.shabiyaa aferraa motummaa naannoo oromiyaa fi federaalaan sakatinsaa WBO garaa shagaar lixaa mugaar fi gindii baaraatitti bobaafamee jiraa. Bayyini isaani 250 kan tahuu yoo tahuu addaa bafanee jiraa. Kanpii poolisii fedeeralaa kaazaachis kessaa fe’aamaa jiruu
#Abiy_Ahmed deebii Oromoon walloo maalif ajjeeffama jedhu gaafatameef deebii kennee jira
‘’Humni addaa naannoo #Amaaraa yakka raawwachaa jiru takka hinqabu. Bakka barbaannetti erguufis aangoo qabna.
–#Tigraayitti erginee jirra, ammas bakka rakkoon jiru maratti ni ergina,. Akkuma Tigraayitti ergine, Sumaalettis bakka biraatittis yoo rakkoon Itoophiyaa diigu jiraate ni ergina.
Qondaalli PP Amaaraa, kan mootuumman Amaaraa itti jiruufi karoora qaban akkasitti ifa godheera.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti waraanni PP barattoota ajjeese.
1. Gammachuu Moosisaa kutaa 12ffaa
2. Boontuu Xilahun Kutaa 4ffaa fi
3. Taaddalaa Balaay kan jedhaman bakka Akkayyuu jedhamutti ajjeessniiru.
Yaa Marqaa Si Hafuufuun Si liqimsuuf!
Minilik was banda(traitor) just as the current neftegna elites says:
Minilik II was committing the same atrocities just as his offsprings (neftegna yearabe kitiregna )now. Imagine what your enemies could tell about your victorythat you achieved against them and victory that you helped them to achieve.
The version of the story dessiminated by our enemies amahar elites is expecetedly diffrent from us. When we defeated them they always say that they captured a general, killed leaders of Woyane , and other soldiers. Eventually, we have discovered that they were lying and those killed men were civilians as opposed to their killing of TPLF leaders and members of Tigray defense force.
Remember to expect a false and fabricated version of the story you knew and victory you have achieved. Hence, Minilik has never achived a victory in Adowa or somewhere else except massacring Oromo and other tribes and selling our land.